डेटिङ के हो, किन जाने र के के कुरामा ख्याल गर्ने ? – ToplineKhabar
April 19, 2017 toplinekhabar0Comment
काठमाडौँ,६ चैत्र । शहर भित्रका युवा किशोर किशोरीहरुका लागि केटा र केटी जोडी बाँधेर डेटिङमा जानु अब करिव सामान्य नै बन्न लागिसक्यो । शहर भित्रका ठाउँहरु र शहर भन्दा बाहिर पनि ‘डेटिङ स्पट’ अर्थात भेटघाट गर्ने सजिलो थलो हुन थालेको छ । कतिपय त स्कूल र कलेजको यनिफर्ममा हुन्छन । सपरिवार घुम्न जाने भन्दा डेटिङमा जानेकै अलि बढी नै देखिन्छ कुनै सार्वजनिक विदाका दिन त । मानौ अब ‘डेटिङ फेशन’ बन्यो शहर । चिडियाखानामा डेटिङका लागि जानेहरुलाई छ ६ बजे पछि सुरक्षा हेर्ने कर्मचारीहरूले जब्र्बजस्ती बाहिर धपाउँदछन । “शनिवार त लभ गर्न आउँनेहरुको चर्तिकाला नै देखिन्छ” त्यहाँका कर्मचारीलाई यसबारे जसले सोधे पनि यस्तै भन्छन् ।
यौनिक डटकमबाट साभार
← आमा-बाबुसँगै सुतेको डेढ बर्षको बालक ओछ्यानबाटै गायब
भोली प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झापा जाँदै →
लघु कथा – मेरो यात्रा
September 10, 2016 प्रदीप भट्ट 1
अहँ ! छुदैन दशैले न त तिहारले नै छुन्छ